Antony 9 mahatonga ny Telegram ho tsara noho WhatsApp | Vaovao momba ny gadget
Antony 9 mahatonga ny Telegram ho tsara noho WhatsApp
Androany WhatsApp no fampiharana fandefasan-kafatra mailaka be mpampiasa eran'izao tontolo izao, na dia tato ho ato aza ny mpifaninana aminy, izay isalasalana fa miavaka telegrama, dia nanakaiky tsikelikely, indrindra noho ireo fiasa sy fiasa izay tsy misy amin'izao fotoana izao ao amin'ny fampiharana an'ny tambajotra sosialy Facebook.
Isika izay mpampiasa Telegram dia miaro an'ity rindranasan-kafatra mailaka sy hoho ity, indrindra satria miantoka ny filaminantsika sy ny angon-drakitra manokana ananantsika izany, ary satria manome ihany koa fiasa mahaliana sy safidy mahaliana hahazoana indrindra amin'ny fampiharana an'ity karazana ity . Androany, na mpampiasa Telegram ianao na raha mbola tsy, dia hasehonay anao Antony 9 no mahatonga anay amin'ny hevitray manetry tena mino fa tsara kokoa ny Telegram noho ny WhatsApp.
Avy eo dia hamaky ianao satria efa nolazainay taminao ny antony 9 hinoanay fa tsara kokoa ny Telegram noho ny WhatsApp, na dia azo antoka aza fa afaka manome anao bebe kokoa izahay. Mazava ho azy, tsy misy olona misalasala fa afaka manome anao antony vitsivitsy mahatonga ny fampiharana fandefasan-kafatra Facebook an'ny Facebook tsara kokoa noho ny fampiharana ny fiaviany Rosiana, fa farafaharatsiny mba hamelana azy ho an'ny lahatsoratra iray hafa, aza misalasala fa amin'ny filaminana tanteraka no hamoahanay azy amin'ity tranonkala ity ihany.
1 Telegram, serivisy maimaimpoana tanteraka
2 Resadresaka manokana, teboka matanjaka
3 Sakano ireo mpampiasa
4 Mandefa horonan-tsary misy habe sy faharetana aho
5 Fanimbana samirery ny hafatra na ny tsiambaratelo nanjary tafahoatra
6 Sticker na fahafinaretana tsy voafetra
7 Mandehana tsy voamariky ny vondrona rehetra
8 Ny kinova Telegram ho an'ny PC
9 Azo atao ny mamafa ny kaonty Telegram sy angona
10 Hevitra malalaka
Telegram, serivisy maimaimpoana tanteraka
Tsy toy ny WhatsApp, serivisy maimaimpoana tanteraka i Telegram Ary na dia ambany dia ambany aza ny fampiharana fandefasan-kafatra fandefasan-kafatra an'ny Facebook, izay tsy maintsy aloantsika isan-taona, dia handany vola fa mety tsy te handoa izany isika.
Soa ihany, ny fampiharana ny fiaviany Rosiana noforonin'ireo mpirahalahy Durov dia azo sintonina maimaimpoana tanteraka, nefa tsy mila mandoa na denary iray akory aza hampidinana azy io na hanavao ny serivisy.
Resadresaka manokana, teboka matanjaka
Ny tsiambaratelo an'ny ankamaroan'ny rindranasan-kafatra fandefasana hafatra eo noho eo dia ampy fotsiny ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa, saingy misy ny sasany izay te-handeha lavidavitra kokoa ary tsy te-hiharihary eo imason'ny olon-drehetra ny resaka ataon'izy ireo. Izany no antony anoloran'ny Telegram antsika ny fahafahany mamorona resaka manokana izay hiarahan'ny mpampiasa hafatra miafina, tsy alefa ihany koa ary tsy mamela soritra amin'ny mpizara an'ny orinasa.
Mba hanombohana chat miafina, sokafy fotsiny ny menio fampiharana ary safidio ny safidy "Chat miafina vaovao". Manomboka amin'ity fotoana ity dia ho afaka hiresaka soa aman-tsara ianao ary tsy hatahotra. Mazava ho azy fa tsy te-ho hendry ianao ary mandingana ny lalàna noresahinay, ary aza maka pikantsary satria raha ataonao izany dia hampandrenesina ilay mpampiasa hafa izay itenenanao fa azon'izy ireo ilay resaka.
Sakano ireo mpampiasa
Ny mety hisakanana ireo mpampiasa dia misy amin'ny ankamaroan'ny fampiharana fandefasan-kafatra eo no ho eo, na dia azonay lazaina aza izany amin'ny Telegram dia misy amin'ny fomba tsotra kokoa izy io. Ary ho ampy ny fanakanana ny mpampiasa manokana ka ao anatin'ny menio sisiny dia miditra amin'ny menio Settings ianao ary avy eo ny menio momba ny fiainana manokana sy fiarovana.
Amin'ity menio ity dia afaka jerentsika ny lisitry ny mpampiasa voasakana ary amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny ilay kisary izay marika plus (+) dia afaka manampy mpampiasa vaovao amin'ity lisitra ity isika.
Mandefa horonan-tsary misy habe sy faharetana aho
Iray amin'ireo antony tsy isalasalana ihany koa mahatonga anay hihevitra ny Telegram ho tsara kokoa noho ny WhatsApp dia ny azo atao ny mandefa horonan-tsary misy habe sy faharetana, zavatra izay tsy azo atao amin'ny fampiharana hafa amin'ity karazana ity.
Ireo horonan-tsary izay noraketinay androany miaraka amin'ny fitaovantsika finday dia mitaky habaka bebe kokoa ary rehefa tonga ny fandefasana azy ireo WhatsApp mametraka ny fetran'ny 16 MB, miaraka amin'ny fatiantoka ihany koa fa ny kalitao sy ny famaritana dia milatsaka be. Miaraka amin'i Telegram dia nanjavona ity olana ity ary afaka mandefa horonantsary izahay, na inona na inona ny habeny. Ary koa, raha te handefa zavatra hafa ankoatry ny fisie ianao, na mavesatra toy inona aza, dia tsy hanana olana ihany koa ianao.
Fanimbana samirery ny hafatra na ny tsiambaratelo nanjary tafahoatra
Raha toa tsy azo antoka loatra ny fahafaha manao chat manokana miaraka amin'ireo mpampiasa hafa dia manome anao ny Telegram ahafahana mamela ny safidy hamono azy ireo hafatra ao anaty iray amin'ireo resaka miafina ireo. Ny tanjon'ity asa ity dia ny tsy misy soritry ny resadresaka nifanaovantsika tamin'ny mpampiasa iray hafa, ary ny ahatsiarovantsika fa amin'ny mpizara lozisialy fandefasan-kafatra eo no eo dia tsy misy soritra na kopian'ny hafatra nalefa na voaray.
Raha te hanimba tena ireo hafatra dia mila miditra amin'ny menan'ny chat fotsiny ianao ary misafidy ny safidy voalohany antsoina "Mametraha famotehana tena". Ho fanampin'izay ary ho eo ambany fifehezanao ny zava-drehetra dia ho azonao atao ny mifidy ny fotoana tokony hofoanana hamafana ireo hafatra ireo.
Sticker na fahafinaretana tsy voafetra
Manolotra antsika ny WhatsApp ny fahafahana mandefa any amin'ireo mpampiasa hafa fantatra amin'ny hoe emoticons, izay mazava ho azy fa misy ihany koa amin'ny Telegram. Ho fanampin'izany, ny fampiharana ny fiaviany Rosiana koa dia manome antsika ny fahafaha-mandefa sy mankafy ireo vita batemy ho sticker.
Raha mbola tsy nahita ianao Ny sticker Telegram dia azo faritana ho sary masina izay miasa sy tratra kokoa, izay azo sintonina maimaim-poana ary misy an'arivony ao amin'ny tamba-jotra. Avy amin'ireo miniony, amin'ny alàlan'ny tarehintsoratra Star Wars ary mahatratra mpanao politika marobe, afaka mankafy sticker mipetaka an-jatony izahay.
Ho fanampin'izay, raha tsy maharesy lahatra anao loatra ireo sticker vita, dia afaka mamorona sticker foana ianao hampiasaina amin'ny vondrona zarainao amin'ny namanao na amin'ny fianakavianao.
Mandehana tsy voamariky ny vondrona rehetra
Ny vondron'ireo fampiharana fandefasana hafatra eo noho eo dia lamaody ary tsy mahagaga mihitsy raha ampidirina amina vondrona antsasa-polo isika, izay tianay tsy ho voamarika ary ohatra ny amin'ny WhatsApp tsy azonay, satria efa nanambara ny anay izahay nomeraon-telefaona. Io dia mitovy amin'ny fanamorana ny fahazoan'ny mpampiasa maro ny nomeraon-telefaona sarobidy izay tsy omentsika na iza na iza mihitsy.
Ao amin'ny Telegram hanampiana mpampiasa rehetra dia tsy mila mahafantatra ny nomeraon-telefaonany izahay ary ho ampy anao ny hanome anao ny anaranao. Ankoatr'izay, amin'ny vondrona dia afaka tsy voamariky tanteraka isika satria ny nomeraon-telefaonintsika dia tsy haseho amin'ny fotoana rehetra, mitahiry ny tsiambaratelontsika ary ambonin'izany rehetra izany dia manalavitra antsika amin'ny fifosana sy ny mozika izay ao amin'ireto vondrona ireto karazana taona lasa izay dia tsy te hanampy afa-tsy ianao hahafantatra raha nahomby tamin'ny fiainana toa azy ireo ianao.
Ny kinova Telegram ho an'ny PC
Raha ny kinovan'ny Telegram ho an'ny finday dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo rindranasan-kafatra fandefasan-kafatra tsara indrindra misy ankehitriny, ny kinova PC dia tsy lavitra aoriana kely ary manome antsika ny asany sy ny safidy rehetra ananantsika amin'ny finday avo lenta.
Amin'ny alàlan'ny fanitarana Telegram ho an'ny Chrome na amin'ny alàlan'ny kinova an-tranonkala dia afaka mifampiresaka amin'ireo mpifanerasera aminay izahay ary manararaotra ireo tombony izay, ohatra, manolotra anay ny solosainay.
Azo atao ny mamafa ny kaonty Telegram sy angona
Tsy toy ny fampiharana fandefasan-kafatra hafa eo noho eo Telegram dia mamela antsika hamafa tanteraka ny kaontinay, tsy mamela soritry ny angon-drakitra, resaka na sary nalefa na voarainay.
Tsy dia betsaka ny mpampiasa te-hamafa ny kaontiny amin'ity karazana fampiharana ity, fa raha sanatria misy izany dia azo antoka fa vaovao lehibe fa amin'ny Telegram dia dingana haingana sy mora izy io.
Androany eny an-tsena dia misy fampiharana fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo misy, miaraka amin'ireo teboka tsara sy ratsy. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mampiasa WhatsApp, saingy maro ny mpampiasa no mirona hampiasa Telegram na koa, toa ahy, satria tsy ny olon-drehetra no nametraka ilay rindranasa amin'ny finday avo lenta. Ary izany dia ny mahita hoe iza no maharesy lahatra ny reniko fa tsara kokoa noho ny WhatsApp ny Telegram, miaraka amin'ny asa nandaniany vola azy hanjakazahana ny fampiharana fandefasan-kafatra be mpampiasa indrindra eran-tany.
Raha mbola tsy nanandrana Telegram ianao dia tsy tokony ho hafa ny tolo-kevitray fa tsy andramo izaoNa dia azo antoka kokoa aza izany ary manolotra antsika manokana fiainana manokana, misy teboka manan-danja kokoa izay azo antoka fa tianao sy handresy lahatra.
Heverinao ve toa anay fa Telegram tsara kokoa noho ny WhatsApp?. Azonao atao ny manome anay ny hevitrao momba izany ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny fampiasana ny iray amin'ireo tambajotra sosialy misy anay. Tianay ihany koa ianao milaza aminao anay izay fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo na fampiharana ampiasainao izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Antony 9 mahatonga ny Telegram ho tsara noho WhatsApp
tany dia hoy izy:
Telegram tsara kokoa noho ny whatsapp? Mpanompo sampy izy. Mpampiasa 1000 tapitrisa manohitra 40, raha fintinina ...
Ohatrinona no aloany anao? Fantatrao ve fa ny dokam-barotra, na dia amin'ny endrika fampahalalana aza, dia tsy maintsy ampandrenesina?
Hahaha ,, Krismasy sambatra
Nanomboka oviana no sarobidy amin'ireo mpampiasa azy ny fampiharana? ...
renitantely dia hoy izy:
Azo antoka, ary Fiat Uno dia tsara kokoa noho Audi R8 satria betsaka kokoa ny olona mampiasa azy
Mamaly an'i Bee
Factet dia hoy izy:
Hitako izao fa ny WhatsApp manana mpampiasa 1000 miliara dia mahatonga azy io ho tsara kokoa noho ny Telegram, izay "ihany" no manana 40 tapitrisa. Na tsara kokoa ny fampiharana iray na ratsy kokoa noho ny iray hafa dia omena lanja amin'ny fomba hafa.
Amin'ny lafiny iray, ampiasao izany dia miteny ianao
Valiny amin'ny Factet
Luis Arturo dia hoy izy:
Telegram dia tsara kokoa
Valiny tamin'i Luis arturo
Alvaro C. dia hoy izy:
Toa fampiharana tsara izany raha ny fifandraisako 350 dia 1 ihany no manana an'ity fampiharana ity. Sldes.
Valiny tamin'i Alvaro C.
Sebastian rolong dia hoy izy:
Telegram dia ambony noho ny whatsapp tiako ho anao rehetra hampiasa telegram hahafahantsika mandefa rakitra bebe kokoa.
Telegram dia manana ny asany saika ny fampiharana fandefasan-kafatra ICQ taloha izay azo antoka, toy ny telegram
Mamaly an'i Sebastian rolong
EJ AU dia hoy izy:
Ho fanampin'izay, ankehitriny dia misy pejy toy ny fotowhatsapp.net izay ahitanao ny sarin'ny piraofilina sy ny satan'ny fidiranao amin'ny nomeraon'ilay olona
Valio amin'i EJ AU
Rehefa manao an'ity karazana paositra ity dia tokony tsy hampiasa teny toa "izao tontolo izao."
Satria amin'ny Aziatika iray no ilazanao WhatsApp, ary valio hoe Inona, inona izany?
Misy manjaka ny hafatra WHAT.
Rosia sy ireo firenena mifanila aminy, Telegram mihitsy.
Mexico sy Amerika Latina mihamitombo miaraka amin'i Wechat.
Ary raha Telegram tsara kokoa noho WhatsApp. Tsy dia fantatra loatra.
Pejy sy rindranasa hanaovana fanamboarana virtoaly
Ity dia mety ho ny Nintendo NX mpanara-maso